I-ROMANO Igama lomnqophiso kunye neMvelaphi
Lithetha ntoni igama lokugqibela elithi Romano?
Igama eliqhelekileyo laseTaliyane elithi Romano laliqhelekileyo lisetyenziswe ukubonisa umntu owayevela eRoma, e-Italy, evela kwifom yaseTaliyane yaseRoma , igama lesiLatin elithi "iRoma."
Inye igama elongezelelweyo : I- ROMANI
Igama Igama: IsiTaliyane , iSpanish
Abantu abaPhezulu abanegama elibizwa ngokuba nguROMANO
URay Romano - umlingisi waseMerika kunye nomculi
UGiulio Romano - umzululwazi waseNtaliyane kunye nezakhiwo zobugcisa
Romano Romanelli - umdwebi waseTaliyane
Kuphi abantu abanegama lomnxeba weROMANO?
I-Romano yi-1,730 yeyona nkcukacha ngokuqhelekileyo kwihlabathi, ngokubhekiselele kwidatha yokusabalalisa igama kwi-Forebears, kodwa i-6 iyona eqhelekileyo e-Italy. Igama leRomano liqhelekile kwiArgentina, apho li-86, lilandelwa nguMonaco (97th).
Ngaphakathi kweItali, isibongo seRomano siqhelekileyo sifumaneka kwingingqi yaseCampania, ngokwe-WorldNames PublicProfiler, kunye nakwezinye iindawo zokuqala ze-Italy. Iqonga liqhelekile nakwiNtlabathi yeSpain. ENyakatho yeMerika, iRomano ixhaphake kakhulu eQuebec, eCanada, kunye neNew England, eNew York, ePennsylvania, eWest Virginia, eCalifornia, e-Nevada, e-Illinois, eLouisana naseFlorida.
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name ROMANO
Ukutsho kwegama eliqhelekileyo lamagama aseItaliyane
Ukufumanisa intsingiselo yegama lakho lokugqibela laseTaliyane kunye nesi sikhokelo samahhala kwintetho yeTaliyane intsingiselo kunye nemvelaphi yegama eliqhelekileyo lamagama aseItaliyane.
Indlela yoPhando lweLifa leLifa leLifa
Qalisa uphando ngeengcambu zakho zase-Itali kunye nesi sikhokelo sokuphanda ookhokho baseItaliya e-Italy. Kubandakanywa ukujonga ngokubanzi iirekhodi ezinkulu zoLwandle lwe-Italia, indlela yokufikelela ezi rekhodi, amagama aseNtaliyane kunye neentsingiselo zawo, iipateni ezibizwa ngokuba ngamaTaliyane kunye nezinye izixhobo zoPhando lwezobuNtu.
Indlela yoPhando lweeNkcubeko zamaSpanishi
Funda ukuba ungaqalisa njani ukuphanda ookhokho bakho baseSpain, kubandakanywa izinto ezisisiseko zokuphanda ngemithi yentsapho kunye nemibutho ethile yelizwe, iirekhodi zezobuhlanga, kunye nezibonelelo zaseSpeyin, i-Latin America, iMexico, iBrazil, iCaribbean kunye namanye amazwe aseSpeyin.
I-Romano Crest Family - Akusikho Oko Ucingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto injenge-Romano intsapho okanye isambatho seengalo kwi-rename yaseRomano. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
I-ROMANO I-Family Genealogy Forum
Khangela le bhansela elithandwayo lokuzalwa lomnxeba wegama lomnxeba waseRomano ukufumana abanye abangaphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela umbuzo wakho we-Romano.
I-FamilySearch - UROMANO Genealogy
Ukufikelela ngaphezu kwezigidi ezi-2.1 ezirekhodiweyo zembali zemveli kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca eposwe kwi-rename yaseRomano kunye neenguqu zayo kwiwebhusayithi yezahlulo-mhlaba ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
I-GeneaNet - Iirekhodi zaseRomano
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweenkcukacha, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abanomnxeba waseRomano, ngokugxininisa kwiirekhodi nakwiintsapho ezivela eFransi, eSpeyin nakwamanye amazwe aseYurophu.
I-ROMANO Igama lomnxeba
Uluhlu lokuposa lwangaphandle lwabaphandi begama le-Romano kunye neentlobo zalo ziquka iinkcukacha zokubhaliselwa kunye neengxelo zokugcinwa kwimiyalezo yexesha elidlulileyo.
DistantCousin.com - UROMANO Genealogy & History Family
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lokugqibela elithi Romano.
I-Romano Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwimithi yentsapho kunye neengqungquthela kwiirekhodi zomthonyama kunye neembali zabantu ngabanye abanegama lokugqibela elithi Romano kwi-website yeGenesalogy Today.
Hanks, uPatrick noFlavia Hodges.
Inkcazelo yeSurnames. I-Oxford University Press, ngo-1989.
I-ARTHUR Igama lomntu igama kunye nomthombo
KUHN - Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
IBHAYIBHILE Igama lokugqibela Umthombo kunye nenjongo
I-TURNER Igama lomnqophiso kunye nemvelaphi
I-COOPER Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
I-GUERIN - Igama lomnqophiso kunye nomlando weNtsapho
Fumana Abadala Bakho e-Great Britain
I-ADAMSKI - Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
I-ROGERS Igama lomnxeba Inqaku kunye neNtsapho yeMbali
I-SZABO Igama lomnqophiso kunye nemvelaphi
I-TAFT Igama lomnqophiso nomxholo
Stag Moose (iCervalces Scotti)
Ngaba Amanzi Amanzi Ayenayo I-Bull Sperm?
I-PGA Tour Q-School (Abanqobileyo, ifomati kunye nalokho okutshintshwayo)
Amarekhodi avulekileyo aseMerika
Ukuthelekisa iLatex kunye neSilicone zokubhukuda
I-Movement of Liberation Movement
Ukukhanya kuLungele Izinto zeMhlaba (LREE)
I-Admiral uDavid G. Farragut: IHero loMbutho weManyano
Indlela yokubopha ukulinganisa umfanekiso-8 i-Knot
I-AI / AIS-isiFrentshi esichazwa nge-AI kunye ne-AIS
Imbali emfutshane yeNational Party
I-Cómo ibonisa irekhodi lobugebengu kwi-Estados Unidos y efectos migratorios
Indlela yokuyila iNzululwazi yokuLungisa iNzululwazi
John Carroll Yunivesithi ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ixabiso lokukhuthaza ukuhlonishwa kwiZikolo
Imbali Yomfanekiso Wezobuchweba
Phezulu uBruce Springsteen Imibala yee-80s
Inqanaba leSikolo samaFrentshi kunye namagama eBakala
Umda ukususela ngo-1890 ukuya ku-1900
Iingcaphuno ezibuhlungu zoLuthando, ukwahlukana, ukuphelelwa lithemba kunye nethemba
I-Cheers, i-Chants, ne-Yells
Isikhokelo Esidlulileyo Esigqibeleleyo kunye Esidlulileyo
UFrancis Ouimet I-Biographie: I-Amateur Eye yavuselela i-American Golf
UkuLwa kweLwa kweDwala kwenziwa lula